Tag: ndu ​​gen | Martech Zone
Tag: ndu ​​gen
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, Plezi, onye na-eweta ngwa ahịa ngwa ahịa SaaS, na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ ya na beta ọha, Plezi One. Ngwá ọrụ a n'efu na nke nwere nghọta na-enyere ụlọ ọrụ B2B obere na ọkara aka ịgbanwe webụsaịtị ụlọ ọrụ ha ka ọ bụrụ saịtị ọgbọ ndu. Chọpụta ka o si arụ ọrụ n'okpuru. Taa, 69% nke ụlọ ọrụ nwere weebụsaịtị na-agbalị ịzụlite visibiliti ha site na ọwa dị iche iche dị ka mgbasa ozi ma ọ bụ netwọk mmekọrịta. Agbanyeghị, 60% n'ime ha
Na Mọnde, Nọmba 14, 2017 Na Mọnde, Nọmba 14, 2017 Douglas Karr
LinkedIn na-aga n'ihu bụrụ isi mmalite maka azụmaahịa m ka m na-achọ atụmanya na ndị mmekọ maka azụmaahịa m. Amaghị m na otu ụbọchị anaghị agafe na anaghị m etinye aka na akaụntụ aka ọrụ m iji jikọọ ma zute ndị ọzọ. LinkedIn na-aga n'ihu na-amata ọnọdụ ha dị mkpa na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-eme ka ikike azụmaahịa jikọọ maka ịbanye ma ọ bụ nweta. Ndị ahịa na-achọpụta na nsonaazụ nchịkọta na-ebelata dị ka atụmanya
Tọzdee, Disemba 10, 2015 Tuesday, August 1, 2017 Ọnye na -bụ Doug Bewsher?